जनताको काम गर्न उमेरले छेक्दैन , – वीरबहादुर बस्नेत मोरङ–३ प्रदेश सभाका आकांक्षी | www.aagopati.com Websoft University
जनताको काम गर्न उमेरले छेक्दैन , – वीरबहादुर बस्नेत मोरङ–३ प्रदेश सभाका आकांक्षी
पथरीशनिश्चरे,असोज ११ । मोरङ पथरीशनिश्चरेका कांग्रेस नेता बीरबहादुर बस्नेतले आगामी मङ्सिर २१ गते हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (क)बाट उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् ।
तीन दशक यता कांग्रेसको मात्र हैन ,समग्र पथरीशनिश्चरेको स्थायी चन्दादाताका रुपमा परिचित ७१ वर्षीय बस्नेतले मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग भने –पार्टी भन्दा माथि उठेर सामाजिक काम गरेको छु । अब मलाई पार्टीले न्याय गर्नुपर्छ ।
आजको समृद्ध पथरी निर्माणका लागि बस्नेतले धरै पसीना बगाएको पथरीका कांग्रेस कार्यकर्ता बताउँछन् । बस्नेत भन्छन–‘कांग्रेस सरकारमा भए पनि नभए पनि मैले मेरो सामथ्र्यले भ्याए सम्म पथरीको बिकासमा योगदान गरेको छु । बुढो भइसक्नुभयो लौरो दिने बेलामा पार्टीले टिकट देला भन्ने जिज्ञाषामा उनले भने – वीरगञ्ज महानगरपालिकाकी शान्ति कार्की उप मेयर हुने पक्का भइसक्यो । म त भरखर ७१ वर्षको भएँ । काम गर्ने मन छ । पार्टीले अवशर दियो भने चुनाव जितेर देखाउँछु ।
बस्नेत कांग्रेसका सत्तिसाल झैं दृढ कार्यकर्ता हुन । भोजपुरका तत्कालीन कांग्रेस नेता हेमराज कोइरालाको प्रेरणाबाट कांग्रेस राजनीतिमा लागेका बस्नेत २०४२ सालमा मोरङको पथरी झरे । मधेस झरेसँगै सामाजिक काममा लागेका बस्नेत सोही वर्ष प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको सत्याग्रह आन्दोलनमा सरिक भए । । २०४६ सालमा बहुदल आएपछि बस्नेत पथरी कांग्रेसको उप सभापति बने । उनले एक वर्ष पछि नै कार्यवहाक सभापतिको जिम्मेवारी पाए । त्यसपछि क्षेत्रीय प्रतिनिधि ,क्षेत्रीय सदस्य हुँदै चार पटक पार्टीको महासमिति सदस्य बनेर पार्टीको जिम्मेबारी सम्हालेका बस्नेत लामो समय पार्टीमा क्रियाशील रहेपनि हाल सम्म कुनै पनि लाभको पदमा पुग्न सकेका छैनन ।
पार्टी संगठन कमजोर भएको निर्वाचन क्षेत्रमा किन उम्मेद्वार बन्न खोज्नु भयो भन्ने प्रश्नको सटिक जवाफ दिँदै बस्नेतले भन्नुभयो–‘मैले पार्टीको क्षेत्रीय कार्यालय निर्माणका लागि मात्र होइन पथरीशनिश्चरेका मन्दिर,विद्यालय,दुरसञ्चार कम्पनी,खानेपानी उपभोक्ता समूहका कार्यलय निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको छु । कतै निशुल्क दिएको छु , कतै उपलब्ध गराउन ‘लविङ’ गरेको छु । ति सबै संघ संस्थामा कांग्रेसका मात्र ब्यक्ति छैनन । पथरीको इलाका प्रहरी कार्यालय भवन मेरै अध्यक्षमा बन्यो । उनले थपे – सबै काम भन्ने हो भने एउटा पुस्तक बन्छ ।
घरको भित्तामा दुई दर्जन बढी संघ संस्थाले गरेको सम्मानका प्रमाणपत्र देखाउँदै बस्नेतले भने –‘यि सब साक्षी प्रमाण हुन । मैले भन्नै पर्दैन । आज सम्म नगद ,जिन्सी र जग्गा गरी कति मूल्य बरावरको सम्पत्ति दान गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने –‘ठ्याक्कै हिसाव त गरेको छैन । तर २ करोड नाघ्यो जस्तो लाग्छ । उनले पथरी बहुमुखी क्याम्पसलाई मात्र ५ लाख नगद दिएका थिए ।
दिएर आफ्नो हुन्न भन्छन नि ?भन्ने जिज्ञासामा उहाँको जवाफ थियो , म पु¥याउँन गएको होइन , साथीभाई सबै आएर अनुरोध गरेपछि सहयोग गरेको हुँ । पैसा धेरै भएर होइन ।
अहिले ७१ वर्षको उमेरमा पनि उनीसँग काम गर्ने उत्तिकै ईच्छा शक्ति छ । पथरी बहुमुखी क्याम्पस,पञ्चायत मावि , भुल्के जल्पादेवी मन्दिरको स्थापना र सञ्चालन मात्र होइन , आजका मिति सम्म पनि कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहेका छन –बस्नेत । पथरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति र नर्वदेश्वर शिवालय मन्दिर ब्यवस्थापन समितिको उनी अध्यक्ष छन ।
तपाईका चुनावी एजेण्डा चाँहि के के हुन भन्ने जिज्ञाषामा उनले मन खोलेर जवाफ दिँदै भने – म यो गर्छु ,उ गर्छु भन्दिन, जहाँ समस्या पर्छ त्यहाँ पुग्छु र नागरिकको अप्ठ्यारोमा साथ दिन्छु । तर त्यसो भन्दैमा एजेण्डा नभएका होइनन ।हेर्नुस पञ्चायत कालमा पनि दोहोरो स्वामित्वको जग्गा ब्यवस्थापनको मुद्दाले पञ्चहरूले चुनाव जिते । बहुदलमा एमाले र माओवादीले चुनाव जिते । तर खोई काम भएको ? खोई कसका हातमा लालपूर्जा छ ? आज लालपूर्जा नभएका नागरिकको निर्वाचन क्षेत्र भनेर चिनिएको छ ,हाम्रो क्षेत्र । २०३६ साल देखि बसोवास गरेको सुकुम्बासी बाबु आज नातीको धनी भएको छ , कतिका पनाती जन्मिसके होला तर ऊ सुकुम्वासी नै छ , यो कस्तो नियति हो ? ३५ वर्ष यता एउटै एजेण्डा छ , जब चुनाव आउँछ , अनि कम्युनिष्टहरू हामी गरिवको पार्टी तपाईहरू पनि गरीव नागरिक । हामी तपाईलाई लालपूर्जा दिन्छौं भनेर मत माग्छन । तर उपलब्धि खोई ? सभासदले आफू बसेको जग्गा धनीलाई दाम(पैसा) दिएर जग्गा आफ्नो नाममा पारे । तर पैसा नहुने हरुले कहिले लालपूर्जा पाउँने ?हामी, वर्षौ देखि ढाँटिएका यस निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई दुई वर्ष भित्रमा लालपूर्जा वितरण गर्छौं । यसका लागि प्रादेशिक सरकार बन्न आवश्यक छ । प्रदेश सरकार बन्नासाथ हामी स्थानीय निकाय सँग समन्वय गरी उच्च स्तरीय भूमि आयोग गठन गर्छौ र आयोग मार्फत यहाँका नागरिकलाई जग्गाधनी बनाउँछौं ।
प्रस्तुति हरि कोइराला
Labels: bignews अन्तर्वार्ता